ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘယျအသငျးကအကောငျးဆုံးပါလဲ? ကိုယျ့အကွိုကျပျေါမူတညျပွီး ဒါမှမဟုတျ ဆုဖလားတှေ၊ရမှတျတှပေျေါမူတညျပွီးအကောငျးဆုံးအသငျးက ဘယျအသငျးပါဆိုပွီးပွောကွပါလိမျ့မယျ။ မနျယူရဲ့ဒုတိယဂိုးသမားဖွဈသူ ရိုမီရိုကတော့ သူအခုပါဝငျနရေတဲ့မနျယူအသငျးဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောငျးဆုံး အသငျးဖွဈပါတယျလို့ပွောဆိုလာပါတယျ။ တကယျလညျးမနျယူဟာအကောငျးဆုံး အသငျးတဈသငျးအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့တဲ့အခြိနျတှရှေိပါတယျ။
ရိုမီရိုဟာ 2015 ခုနှဈမှာ ဆနျဒိုရီးယားအသငျးကနေ မနျယူအသငျးဆီရောကျရှိလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ နညျးပွမျောရငျဟိုလကျထကျမှာ ဒီဂီယာက ပထမဂိုးသမားအဖွဈပှဲထှကျခဲ့ရပွီး၊ ရိုမီရိုကတော့ ဒုတိယဂိုးသမားဖွဈခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ နညျးပွဆိုးလျရှားလကျထကျမှာလညျး ဒုတိယဂိုးသမားအဖွဈသာဆကျနခေဲ့ရတဲ့ ရိုမီရိုက ဒုတိယဂိုးသမားအဖွဈအသငျးထဲမှာ နရေတာလှယျကူတဲ့အရာမဟုတျကွောငျးပွောဆိုပါတယျ။
“ကြှနျတျောအနနေဲ့ အခှငျ့အရေးရဖို့စောငျ့ဆိုငျးရငျးကွိုးစားနပေါတယျ။ အခှငျ့အလမျးသာရခဲ့မယျဆိုရငျ ကြှနျတျောအဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့လေးနှဈလုံးမှာ ကြှနျတျောခကျခဲတဲ့အနအေထား တှကေိုရငျဆိုငျခဲ့ပွီးပါပွီ။ အခှငျ့အလမျးတှရေဖို့နတေို့ငျးကွိုးစားနသေလို၊အခှငျ့အခါပေးတဲ့အခါမှာလညျး အကောငျးဆုံးဖွဈဖို့ ကြှနျတျောကွိုးစားလုပျဆောငျမှာပါ။ ကြှနျတျောကမ်ဘာပျေါက အကောငျးဆုံးအသငျး မှာရောကျနတောပါ။ ကြှနျတျောငယျစဉျတုနျးက မနျယူမှာကစားခငျြတယျလို့ပွောခဲ့ပါတယျ။ အခုကြှနျတျောအဲဒီအခှငျ့အရေး ကိုစောငျ့နတောပါ”လို့ ရိုမီရိုက အငျတာဗြူးမှာပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ရိုမီရိုအနနေဲ့ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက မနျယူအသငျးအတှကျ ပရီမီးယားလိဂျမှာ 1 ပှဲသာကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး၊ အခုရာသီမှာလညျးပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့မြှျောလငျ့စောငျ့ဆိုငျးနရေပါတယျ။ ကွာသပတေးညမှာကစားမယျ့ ယူရိုပါလိဂျအုပျစုပှဲစဉျမှာ အသကျ 32 နှဈအရှယျ ရိုမီရိုတဈယောကျပှဲထှကျခှငျ့ရမှာလား ဆိုတာစောငျ့ကွညျ့ ရပါမယျ။ မနျယူအင်ျကြီဝတျဆငျရဖို့အတှကျဟာ သူ့အတှကျအိပျမကျဖွဈခဲ့ကွောငျးပွောကွား ခဲ့တဲ့ ရိုမီရိုတဈယောကျ ကံကောငျးပါစလေို့ဆုတောငျးပါတယျ။
ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံးအသင်းမှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ မန်ယူရဲ့ဒုတိယဂိုးသမား ရိုမီရို
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်အသင်းကအကောင်းဆုံးပါလဲ? ကိုယ့်အကြိုက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဒါမှမဟုတ် ဆုဖလားတွေ၊ရမှတ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးအကောင်းဆုံးအသင်းက ဘယ်အသင်းပါဆိုပြီးပြောကြပါလိမ့်မယ်။ မန်ယူရဲ့ဒုတိယဂိုးသမားဖြစ်သူ ရိုမီရိုကတော့ သူအခုပါဝင်နေရတဲ့မန်ယူအသင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး အသင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုလာပါတယ်။ တကယ်လည်းမန်ယူဟာအကောင်းဆုံး အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။
ရိုမီရိုဟာ 2015 ခုနှစ်မှာ ဆန်ဒိုရီးယားအသင်းကနေ မန်ယူအသင်းဆီရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြမော်ရင်ဟိုလက်ထက်မှာ ဒီဂီယာက ပထမဂိုးသမားအဖြစ်ပွဲထွက်ခဲ့ရပြီး၊ ရိုမီရိုကတော့ ဒုတိယဂိုးသမားဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာလည်း ဒုတိယဂိုးသမားအဖြစ်သာဆက်နေခဲ့ရတဲ့ ရိုမီရိုက ဒုတိယဂိုးသမားအဖြစ်အသင်းထဲမှာ နေရတာလွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။
“ကျွန်တော်အနေနဲ့ အခွင့်အရေးရဖို့စောင့်ဆိုင်းရင်းကြိုးစားနေပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းသာရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်လုံးမှာ ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့အနေအထား တွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခွင့်အလမ်းတွေရဖို့နေ့တိုင်းကြိုးစားနေသလို၊အခွင့်အခါပေးတဲ့အခါမှာလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှာပါ။ ကျွန်တော်ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံးအသင်း မှာရောက်နေတာပါ။ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းက မန်ယူမှာကစားချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်အဲဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာပါ”လို့ ရိုမီရိုက အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရိုမီရိုအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက မန်ယူအသင်းအတွက် ပရီမီးယားလိဂ်မှာ 1 ပွဲသာကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ အခုရာသီမှာလည်းပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။ ကြာသပတေးညမှာကစားမယ့် ယူရိုပါလိဂ်အုပ်စုပွဲစဉ်မှာ အသက် 32 နှစ်အရွယ် ရိုမီရိုတစ်ယောက်ပွဲထွက်ခွင့်ရမှာလား ဆိုတာစောင့်ကြည့် ရပါမယ်။ မန်ယူအင်္ကျီဝတ်ဆင်ရဖို့အတွက်ဟာ သူ့အတွက်အိပ်မက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြား ခဲ့တဲ့ ရိုမီရိုတစ်ယောက် ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။